Mohammed bin Salman "Aniga ayaa mas'uul ka ah dilkii Khashoggi laakiin anigu ma bixin amarkii lagu khaarijiyay"
Mogadishu - 19:31:31
Monday September 30, 2019 - 22:01:36 in Wararka by Super Admin
Dhaxal sugaha Boqortooyada Sucuudiga Mohammed bin Salman ayaa sheegay in uu qaadanayo masuuliyadda dilkii weriyihii Sucuudiyaanka ahaa ee Jamal Khashoggi ee la dilay 02 Oktoobar 2018, laakiin wuxuu caddeeyay inuusan isagu amarka lahayn.
Bin Salman oo wareysi siiyay barnaamijka 60 daqiiqo ee ka baxa CBS ee Mareykanka ayaa waxa uu xusay in falkii lagu dilay Khashoggi uu ahaa mid waxashnimo ah, isla markaana ay si qalad ah u fuliyeen rag u shaqeynayay dowladda Sucuudiga.
"Waxaan qadanayaa mas’uuliyadda dilkaasi sababtoo ah waxaan ahay hoggaamiyaha Sucuudiga sidoo kale maadaama falkaasi ay geysteen shaqsiyaad u shaqeynayay dowladda Sucuudiga" ayuu yiri Mohammed bin Salman.
Mar si toos ah loo weydiiyay inuu isagu bixiyay amarkii lagu khaarijiyay Khashoggi, waxa uu Prince Mohammed ku jawaabay "Maya xaqiiqdii".
Khashoggi oo wax ku qori jiray wargeyska Washington Post ee Mareykanka ayaa waxaa warkiisa la waayay markii 02 Oktoobar, 2018 uu galay qunsuliyadda Sucuudiga ee Turkiga, halkaas oo dibaddana ay ku sugeysay gabadhii u doonnayd ee Turkiga u dhalatay Hatice Cengiz, laakiin nasiib darro waa uu soo laaban waayay waxaana la xaqiijiyay in lagu dhex dilay qunsuliyadda gudaheeda.
Baaritaanno dheer oo la sameeyay ayaa Qarammada Midoobay waxay ku sheegeen in Mohammed bin Salman uu si gaar ah u bixiyay amarkii lagu dilay Khashoggi.
Sucuudiga ayaa sheegay in uu maxkamadeeyay 11 qof oo lagu eedeeyay dilkii Khashoggi,iyadoo arrintaasina si sir ah loo sameeyay illaa iyo haatanna aan hal qof maxkamad la soo taagin.
Dhanka kale mar wax laga weydiiyay Mohammed bin Salman weerarkii 14-kii September lagu qaaday goobaha saliidda lagu sifeeyo ee Sucuudiga ee shirkadda ARAMCO, waxa uu dhaxal suguhu yiri "Ma jiraan wax bar tilmaameed ah oo laga lahaa weerarkaasi, nacas oo keliya ayaana weerara meel shidaalka siisa caalamka», waxaana uu Iran ugu hanjabay inuu tallaabo ka qaadi doono.